Ibhegi yefowuni ye-WPCOf ye-WPC32132 | Zone
1.NOKI: 1. Umsebenzi wokwamkelwa komnwe awufumaneki. 2. Izikrini zokuchukumisa ziya kusebenza xa uxinzelelo lwe-hydraulic. Nceda ubheke kwifowuni yakho kwiindlela zevidiyo kwaye ucofe ukuqala ngaphambi kwamanzi kwaye uthathe imifanekiso ngamaqhosha evolumu yoomatshini.
Ibhegi yefowuni edadayo yefowuni: I-Poich yefowuni yamanzi iyafundwa nge-fubble ye-moya kwicala lakho elivumelayo kwaye liphephe iindleko xa i-lanyard yakho yayingaphandle kohambo lwakho. I-Buoysan ixhaswe ukuya kwi-8.8 Oz / i-250 yeegram ngaphezulu.
I-3.Pipx8 I-Poich yefowuni ye-Waterproof: ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-100 / iimitha ezingama-30 zeemitha ezinobunzulu, zikhusela ifowuni yakho xa ungenayo kwaye uthatha imifanekiso ephantsi kwevolumu yokuthatha imifanekiso). Qiniseka nje ukuba ukutywina ibhegi eyomileyo yefowuni yefowuni ngaphambi kokusebenza phantsi kwamanzi.
4.Umva kwengqondo ye-Fool: kunye nenqaku lokunganyangeki kobushushu, yonke imisebenzi iya kuba yindlela efanelekileyo ngakumbi kuneselula yeselula, nokuba yimvula enkulu, okanye kwisanti yesaqhwithi. Iingxowa zamanzi zinokusetyenziselwa ukuhlamba kwimithombo eshushu (ayidluli i-122 ° F)
5.Ukuyilwa komntu kunye nempahla: Ityala lefowuni ye-Aterproof kunye nezinto zeFluorecent, ziya kukwenza wahlukile phakathi kwesihlwele xa ubunxiba. Isixhobo se-TPU seselfowuni yeselfowuni yenza ukuba uzive uthambile, isikhwama samanzi sinokubamba amaqhosha egumbi, ipasipoti, okanye imali. Elwandle, iphuli yokuqubha, i-diving, kayak, ifowuni yakho, unokuyithemba ukugcina izinto zakho.
Ukusekwa ngo-2010. Imimandla yendawo leyo ngumenzi ophambili ohlelayo ngaphandle kwegiya ephathekayo kunye negiya yokuhamba. Sijolise ekuphuculeni amava okuhamba abathengi kunye nokunceda abantu ukuba bazinandipha ngexesha lokuhamba kwangaphandle, ngakumbi kwimidlalo ye-water. Uninzi lweemveliso zethu ziingxowa zefowuni zamanzi, iingxowa ezomileyo, iingxowa ze-backs, iingxowa zebhayisikile, iingxowa zebhayithi, iingxowa ze-cargo, ichibi lebhafu, njalo. Endaweni yemishini, ukwenza i-PVC, izixhobo ze-TPU, njl njl., Ngumahluko kunye nezinto ezibalaseleyo, ezenza ukuba iimveliso zinemveliso zinengxaki, ezingaphantsi komhlaba. Ngaphezulu kwe-15 r&D Iinjineli eziqengqelekayo ngamava atyebileyo, kuhle kwimbonakalo yemveliso, uyilo lwendlela kunye nophuhliso lwemveliso, ukulungiselela ukuphuculwa kwenkqubo, njl. isisombululo esivela kwingcinga yemveliso yokuvelisa kubathengi. Sithumela ngokusemthethweni izimvo zakho kwaye siqinisekise iprojekthi yakho. Siqhayisa ngemveliso esizimeleyo, ukusukela ngaphezulu kwe-5000 s.q. Iimitha ezinabasebenzi abamalunga ne-150.O -Uorks zibandakanya izityalo ezizenzekelayo ezizenzekelayo, iworkshop yokuchonga. Umgangatho olizimeleyo, kunye nelabhoratri yetekhnoloji ephezulu yegiya ephezulu kunye nezixhobo zokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Kwizixhobo ezinqabileyo zokugqiba iimveliso, imimandla eqhuba inkqubo engqongqo ye-QC kwaye yenkqubo ye-QC yokwenza iimveliso zithembekile kwaye zizinzile. I-Eonesport iphinda iphinde ivule i-tyriticate yenkampani ephezulu yeTekhnoloji kunye nemveliso egunyazisiweyo yi-Bureau. Siyi-BSCI kunye neDisney Olc eqinisekisiweyo kwaye yamkelwe ngabathengisi beAmazon njl. Sifuna ukufaka izinto ezintsha kunye nentsebenziswano evulekileyo.Sinethemba lokwazi ngakumbi izihlobo zamanye amazwe ngemveliso yethu. I-Eodessports iya kuzama ukuzisa amava awona mveliso ulungileyo kubathengi kwihlabathi liphela, kwaye ujonge phambili ekusebenzisaneni nani.